Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Ny 90% n'ny paompy entona UK dia maina noho ny fividianana tahotra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Vaovao • People • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Ny tsy fahampian'ny solika dia mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny mpamily Heavy Goods Vehicles (HGV) satria sahirana ny vinavinan-javaboary hahazoana ny fitaterana ara-potoana.
Ny mpikambana ao amin'ny PRA dia nitatitra ny tsy fahampiana be dia be miaraka amin'ny paompy 50-90% eo amin'ny faritra sasany.
Notsipahan'ny governemanta UK ny resaka tsy fahampiana solika ary nilaza izy ireo fa tokony hividy solika toy ny mahazatra ny anglisy.
Ny sekretera misahana ny tontolo iainana George Eustice dia nilaza fa ny governemanta dia tsy hiantso ny tafika hanatitra solika any amin'ireo tobin-tsolika maina manerana ny firenena.
Ny fikambanana mpivarotra solika Petrol (PRA), izay misolo tena ireo mpivarotra solika britanika tsy miankina izay mitana ny 65% ​​amin'ny forecourt rehetra any UK, dia nilaza fa ny mpikambana ao aminy dia nitatitra ny tsy fahampian'ny solika mahery vaika, taorian'ny nidinan'ny britanika tamina forecourts na dia nampanantena aza ny governemanta fa tsy misy tokony hatahorana. momba.
Araka ny PRA, amin'ny faritra sasany ao amin'ny UK, eo anelanelan'ny 50-90% paompy no maina.
"Mampalahelo fa mahita fividianana solika tampoka isika any amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena," hoy i Gordon Balmer, talen'ny Executive Petrol Retailers Association (PRA) ny alatsinainy teo. Niantso ny olona izy mba tsy hifanena amin'ny fividianana solika. "Mila fitoniana kely isika… raha miala amin'ny tamba-jotra ny olona dia lasa faminaniana manatanteraka ny tenany izany," hoy izy.
Ny fanehoan-kevitr'i Balmer dia tonga andro vitsivitsy taorian'ny nanilihan'ny governemanta ny resaka tsy fahampian'ny solika ary nilaza izy ireo fa tokony hividy solika toy ny mahazatra ny anglisy. Na izany aza, tsy nohenoina ny fanamarihana nataon'ny governemanta satria niforona teo ivelan'ny tobin-tsolika manerana ny firenena ny filaharana nandritra ny faran'ny herinandro. Toeram-piantsonana maro no voatery nikatona satria milahatra mitady lasantsy ireo mpamily mazoto.
Amin'ny alatsinainy, UK Ny sekretera misahana ny tontolo iainana George Eustice dia nilaza fa ny governemanta dia tsy hiantso ny tafika hanatitra solika any amin'ireo tobin-tsolika maina manerana ny firenena. "Tsy mbola mikasa ny hitondra tafika hanao fiara izahay amin'izao fotoana izao," hoy i Eustice, fa nanampy kosa ny mpanazatra ny minisiteran'ny Fiarovana dia nantsoina mba hamafa ny fitiliana fitsapana mitondra fiara mavesatra entana (HGV).
Ny tsy fahampian'ny solika dia mifamatotra amin'ny hanoanan'ny mpamily HGV satria sahirana ny forecourts hahazoana fitaterana ara-potoana. Raha manandrana maka ny Anglisy ho mpamily HGV ny governemanta, ny alahady Westminster dia nanambara ny fanitarana ny drafitry ny visa ho an'ny fanjakana. Ankehitriny, mpamily HGV 5,000 no ho afaka hiasa any Angletera mandritra ny telo volana amin'ny fiomanana amin'ny Krismasy, hanamaivanana ny tsindry amin'ny famatsiana.
Klioba alina miavaka indrindra eto an-tany LOUIS XIII hanolotra ...